झापामा कर णी मा परेका पुरुषले बताए घटना विवरण, घर पुग्दा शरिरमा लुगा थिएन (भिडियो हेर्नुस्) – NepalajaMedia
February 16, 2021 94
झापा । विश्वमा अन्य मुलुकमा यस्ता घटना भएको भएपनि नेपालमा भने पुरुषलाई यस्ता घटना भएको समाचार विरलै आउने गरेका छन् । झापमा कर णीमा परेका एक पुरुषको उपचार सुरु गरिएको छ । उनी सामूहिक कर णीमा परेको बताइएको छ । झापाको कंकाई नगरपालिका ७ निवासी पुरुष माथि यस्तो घटना भएको हो ।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई पुरुष नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । शनिबार झापाको कनकाई नगरपालिका–७ बिरिङ नदी किनारमा दुई पुरुष संगग्न भएर एक पुरुष माथि यस्तो घटना गराएका हुन् । उनलाई घाइते अवस्थामा अस्पताल लगिएको छ ।
उनको अहिले विर्ता सिटी अस्पतालमा उपचार जारी छ । उनले आफुलाई भएको घटनाको बारेमा बताएका छन् । उनी बोल्न सक्ने भएका छन् । पक्राउ पर्नेमा कनकाई नगरपालिका–६ का १९ वर्षीय पारस तामाङ र कनकाई नगरपालिका–७ का २१ वर्षीय विनोद टुडु रहेका छन्। उनीहरुले कनकाई–७ का ३० एक वर्षीय पुरुषलाई खोला किनारमा लगी कर णी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
घाइतेको बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
Prevफाल्गुन महिनाको मासिक राशिफल, यि ७ राशिहरूका लागि निकै शुभ छ यो महिना
Nextआजकै दिन भएको थियो श्रीकृष्णको नि’धन, स्वेताले लेखिन् भावुक स्टाटस
एक शिक्षिकाले गरिन् आफ्नै छात्रसँग विवाह !!! ……. सुहागरातको साथ विधवा भएको नाटक पनि रचिन् !!!
कोरोनाको कहाली : प्रत्येक १५ सेकेण्डमा १ को मृत्यु, विश्वमा ज्यान जानेको संख्या ७ लाख नाघ्यो